सावधान!दोस्रो डोज खोप लगाइसकेकालाई पनि देखिन थाल्याे यस्ताे समस्या |
सावधान!दोस्रो डोज खोप लगाइसकेकालाई पनि देखिन थाल्याे यस्ताे समस्या
August 3, 2021 adminLeaveaComment on सावधान!दोस्रो डोज खोप लगाइसकेकालाई पनि देखिन थाल्याे यस्ताे समस्या
सावधान ! दोस्रो डोज खोप लगाइसकेकालाई पनि देखिन थाल्याे यस्ताे समस्या । दोस्रो डोज खोप लगाइसकेकालाई पनि संक्रमण देखिन थालेको छ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का उमेश दाहालले गत असार २८ गते भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप लगाए ।त्यसको दुई दिनपछि नै उनलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्नेलगायतका लक्षण देखियो । पहिले त उनले खोपको असर होला भन्ने लाग्यो तर, साउन २ गते गरेको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनमा को-रोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । त्यसैगरी विराटनगरका ३२ वर्षीय एक युवालाई पनि गत बुधबार पोजेटिभ देखियो। उनले खोप दुईवटै डोज लगाइसकेका थिए ।
एकाएक शनिबार घाँटी खसखसाउने, टाउको दुख्ने, रुघा लाग्ने जस्ता लक्षण देखियो। सुरुमा उनले भाइरल ज्वरो भनेर वास्ता गरेनन् तर, पीसीआर परीक्षण गराउँदा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । खोप लगाइसकेपछि नलाग्ने, लागे पनि धेरै असर नगर्ने विश्वास आममानिसमा छ। यी दुई युवालाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। ‘तर, खोप लगाएको भए पनि संक्रमण हुने रहेछ’ उमेश दाहालले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘खोप लगाएको छु भनेर ढुक्क हुन नहुने रहेछ।’
लक्षणहरू खोप नलगाएको मानिसलाई जस्तै देखिएको र असर पनि उस्तै पारेको उनीहरू बताउँछन्। फागुनमा पहिलो र जेठ २१ गते को-भिसिल्डको दोस्रो मात्रा पूरा गरेर पनि असार ९ गते दोस्रो पटक पोजेटिभ देखिएका इटहरीका लोचन पौडेलको पनि यस्तै अनुभव छ । ‘खोप लगाएको छु। केही हुँदैन होला भनेर आत्मबल चाहिँ बढे जस्तो हुने रहेछ,’ उनले भने ।
उनलाई यसअघि पनि गत मंसिरमा पोजेटिभ देखिएको थियो। केही दिन घरमा आराम गरेपछि निको भएर काममा फर्किएका थिए। तर, दुवै पटकको संक्रमणमा स्वाद हराउने, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएको उनले बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
एक व्यक्तिको निधनले गाँउ नै शाेकमा,४६ जना गरे एकै ठाउँमा क्रिया
कतारमा स्टेडियम निर्माण गर्दा यतिधेरै नेपालीको मृत्यु,फिफाले बोल्यो यस्तो कुरा।
कोभिड बाट बच्ने अर्को उपचार निस्कियो,आयो अत्यन्तै खुसीको खबर।यो उपचार प्रभावकारी हुने?
नेपाल सरकारले घरमा छोरी हुने परिवारलाई निशुल्क दिने भयो यस्तो सुविधा,अवश्य पढौ
अब हामी ७० काटेकाले सरकार चलाउने होइन,अब नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनुपर्छ:प्रधानमन्‍त्री ओली